Thailand tourism industry meets, asks for opening of borders and skies | Thailand travel news
Home » Lahatsoratra » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Thailandy » Mihaona ny indostrian'ny fizahantany any Thailandy, mangataka ny fanokafana sisintany sy lanitra
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny dia an-tserasera • Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Other • Olona manao vaovao • fanarenana ny dia • Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra • Vaovao momba ny dia any Thailandy • Vaovao momba ny fizahantany • Vaovao momba ny fitaterana • Travel Associations News • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao mivalona
Mihaona ny indostrian'ny fizahantany any Thailandy, mangataka ny fanokafana sisintany sy lanitra
Kabary fanokafana nataon'ny filoha Andrew J Wood Skål International Bangkok
Ireo fikambanana roa nohajaina dia nanao ny fanao isan-taona SKÅL BANGKOK ary PATA THAILAND TOKO Sakafo atoandro Krismasy fiantrana 2020 amin'ity herinandro ity.
Maherin'ny 130 amin'ireo mpitantana ny fizahan-tany sy fizahan-tany any Thailandy lehibe ary vahiny mivondrona ao amin'ny Hotel Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel, nihoatra ny nandrasana ny mpanatrika.
Tohanan'ny orinasa lehibe 8 ny THAI Airways, ny Fahefan'ny fizahan-tany any Thailand (TAT), ny divay Serenity, ny Thai Smile Airways, ny Paulaner, ny solontenan'ny zotram-piaramanidina Bangkok (BAR), ny Sekolin'ny fizahantany momba ny fizahantany ary ny CoffeeWORKS an'ny NIDA. Ny loka dia natolotry ny mpanome indostrialy 30 mahery isan-tsokosoko any Thailandy miaraka amin'ny loka 43 mahery natolotra mba hanangonana vola ho an'ny fiantrana.
Sammy Carolus, Skålleague ary GM ao amin'ny Hotel Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel sy ny ekipany rehetra dia nahazo fisaorana manokana ho an'ny mpikarakara noho ny fanomezana be sy asa fanompoana miavaka nataony tamin'io andro io. Nisy ny fanamarihana manokana momba ny maha-matihanina ny fikambananan'ny hotely, ny fiaraha-miasa ary ny manovaova azy.
Mahafantatra ireo fotoana sy fanamby miavaka atrehin'ny indostria hoy ny filohan'ny Skål Bangkok, Andrew Wood, “Ny tontolon'ny fizahan-tany ao amin'ny tontolo Covid-19 misy antsika dia eo amin'ny toerana hafa tanteraka hatramin'ny 12 volana lasa izay. Amin'ny maha indostria antsika dia mila ady mafy isika mba ho tafavoaka velona sy hiroborobo ary tsy maintsy manao izay ezaka rehetra atao isika hanatonana ireo manana fahefana hametraka fanovana, satria ny fahafantaran'izy ireo fa eo amintsika ny coronavirus toy ny virus hafa, ary toy ny gripa 98% ny olona sitrana aorian'ny aretin'ny Covid-19. Ny fanekena ambaratonga mety hampidi-doza ary ny fanokafana miandalana sy azo antoka ny sisintanintsika sy ny lanitra dia tsy maintsy hitranga tsy ho ela mba hisorohana ny fahasimban'ny rafitra maharitra eo amin'ny sehatry ny fizahantany.
“Ny viriosy dia tsy azo fongorina tanteraka ary tsy afaka milavo lefona isika. Amin'ny maha-indostria manerantany antsika dia lehibe loatra isika ary manakiana loatra ny tanjaka ankapobeny amin'ny toekarena indrindra eto Thailand. 'Niady' lava loatra isika ary niady tamin'ny krizy be loatra mba tsy hahomby ankehitriny.
Hoy ihany i Wood: “Miato kely isika anio ary mieritreritra ho avy tsaratsara kokoa sy mamiratra. Miaraka amin'ny vaksiny eny an-jorony ary mifantoka amin'ny zavatra azo atao, manangana izany sy amin'ny fiaraha-miasa ary mitady tanjona hendry sy azo tratrarina. Matoky aho amin'ny saina mamorona rehetra sy ny finiavana hahomby fa haharitra isika, ”hoy izy. Ny fivoriana manaraka an'i Skål Bangkok dia atao amin'ny volana talata 12 Janoary 2021 amin'ny volana lasa teo, hetsika fisakafoanana an-drenirano ao amin'ny Hotely Peninsula, Bangkok. Ny mpikambana, ny tsy mpikambana ary ny vahiny dia entanina hanatrika ny fivorian'ny tambajotra.